Filankevitra nasionaly teny Ivato : noroahina ny mpikamban’ny Leader Fanilo miisa 11 | NewsMada
Ny an’iza na iza no marina? Nampiato ny birao nasionaly mpandrindra, tarihin-dRakotomamonjy Jean-Max, ny komity mpihevi-draharaha izay nijoro ho filankevi-pifehezana, ny 16 desambra 2015. Namaly izany ireo naato, nampiantso filankevitra nasionaly tsy ara-potoana, teny Ivato, afakomaly.
Tapaka tamin’izany fa roahina ny mpikambana miisa 11: Esoavelomandroso Manassé, Andriamiarisatrana Noël, Rabesa Zafera Antoine, Mahosindrahaja Heriniaina, Raveloson Hasina, Randrianambinina Alphonse, Berthnes Lalaina… Antony, fanitsakitsahana matetika sy miverimberina ny sata mifehy ny antoko sy ny andininy vitsivitsy amin’ny fitsipika anatiny.
Ny birao nasionaly mpandrindra ihany no manana fahefana
“Misalotra ny fahefana tsy ananany ny komity mpihevi-draharaha, miteniteny foana. Ny birao nasionaly mpandrindra ihany no manana fahefana, araka ny sata mifehy ny antoko”, hoy ny filohan’ny birao nasionaly mpandrindra, Rakotomamonjy Jean-Max.
Ny birao nasionaly mpandrindra izay nofidin’ny filankevitra nasionaly tamin’ny 12 desambra 2012 no manankery mitantana ny antoko mandra-pahatapitra ny fe-potoam-piasany, desambra 2017, araka ny fanazavana azo. Ny filankevitra nasionaly no fahefana faratampony eo anivon’ny antoko.
“Filankevitra nasionaly”… tsy manankery
“Aminay, toy ny tsy misy iny fanapahan-kevitra iny, efa nampiatoana tao anatin’ny antoko tamin’ny 16 desambra 2015, tamin’ny alalan’ny filankevi-pifehezana, ireo nampiantso ny “filankevitra nasionaly” sy ny birao nasionaly mpandrindra”, hoy kosa ny avy amin’ny komity teknika izay anisan’ny noroahina, Raveloson Hasina.
Tsy midika fa afa-manao izay tiany hatao ny birao nasionaly mpandrindra, na hoe lany tamin’ny filankevitra nasionaly aza. Olom-panjakana izy ireo, mampiseho ny kilasy politika malagasy amin’izao fotoana izao: manana fahefana sy vola, manao izay tiana hatao fa tsy fehezin’ny lalàna. Mampandeha ny asan’ny antoko ny sata sy ny fitsipika anatiny.
Iza no handamina ny ady? Na tompon’ny teny farany… Mila fitsarana na fanelanelanan’ny minisiteran’ny Atitany? Raha tsy izany, hivaky roa ihany…